Siyaasad – Wargeyska Waxgarad
Home / Siyaasad
Isbeddelka Geeska Afrika Iyo Saamaynta Imaaraadka
June 22, 2018	Falanqayn, Siyaasad 0
Booqashadii dhawaan uu ku tagay dalka Itoobiya dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed Bin Zayid isaga oo wada heshiis 3 Bilyan oo Dollar lagu daahfuray waxay booqashadaasi saldhig u noqon karaa aragtiyo siyaasadeed oo mar kale ka askunma Bariga Afrika oo muddooyinkii ugu danbeeyey dano siyaasadeed oo qoto dheer laga lahaa. Sadexdan …
Khatarta uu leeyahay heshiiska Itoobiya lala galay
June 17, 2018	Amni, Falanqayn, Siyaasad 0
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed markii uu ku noqday dalkiisa booqashada Muqdisho ka dib wuxuu u warramay Tvga dalkaasi Itoobiya wuxuuna sheegay qorshaha ay doonayaan in uu yahay sidii marka ugu danbaysa ay shucuubta Geeska Afrika u midoobi lahaayeen oo ay u noqon lahaayeen hal dal. Hadalladiisana waxaa ka mid …
Sooyaal Cusub ayaa ka samaysmaya Geeska Afrika
June 17, 2018	Falanqayn, Siyaasad 0
Halkan Soomaalilaan waxa ay dad badani soo celcelin jireen “Itoobiya waa walaalaheen” iyo “Xamar waxa ka dhow Addis Ababa.” In kasta oo aragtidaas lagu kala qaybsanaa, oo la fili karo in dadka qaar u arkayeen in cidayow gaar ihi “awrkooda ku kacsanaysay”, waxa ay haddana u muuqatay ifefaale ah in …
Diintu horumar miyey innaga hortaagan tahay?
May 27, 2018	Falanqayn, Siyaasad, Taariikh 0
Waxaa jira dad ku dooda in diinta Islaamku u baahan tahay isbeddel la mid ah kii reer Yurub kula kaceen diintoodii qarniyo hore si ay horumar u gaaraan. Qoraalkani wuxuu dulmarayaa xiriirkii ka dhexeeyey diinta Kirishtaanka iyo nolosha qofka caadiga ah qarniyadii dhexe iyo in la barbar dhigi karo xaaladda …
Saldhig Berbera ah iyo Weydiimo La xidhiidha
March 11, 2018	Aragti, Siyaasad 0
Waxa la yidhi Soomaaliland iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyey saldhig ay dawladda gadaal ka magacdhabani ka dhisato Berbera. Adduunka maanta way ku badan tahay dawlad saldhig millatari ku leh dal shisheeye oo la yaab ma laha; ma se aha, run ahaan, wax la isku majeerto, faan na hadalkii …
Riddo Dhagarqabe: Dhiillada Colaadda Oromada iyo Soomaalida!
September 29, 2017	Amni, Falanqayn, Mux39-Okt17, Siyaasad, Warar 0
Sida taariikhda dheer iyo ta dhowba ku xusan, dhaqanka siyaasadeed ee Itoobiya, muddo dheer waxa uu ahaa dhuxul dambas huwan. Amda Seyon, ayaa lagu tiriyaa in uu ahaa aasaasihii dawladnimada kelitaliska ku dhisan ee Itoobiya. Soddon gu’ oo ka soo bilaabmaya 1314’kii kuna idlaanaya 1344’kii ayaa la sheegaa—in xukunkiisu goonyaha …
Dawladnimadu Waa Dogob la Wada Sido
September 29, 2017	Aragti, Falanqayn, Mux39-Okt17, Siyaasad 0
“Haddaan weynay waaligu inuu ina walaaleeyo, Oo waa ku leenee sidii weled inoo dhawro, Miyaan weyney weeyada cid kale ula wareegeeda?” Yuusuf Sharmaarke (Shan-ku-Kibir) Qarni ka hor intii aan gumeystuhu maamullada ka samaysan dhulka Soomaalida, dadku waxa uu ahaa qabaa’il xeer ku wada nool. Labo qabiil oo walba waxaa …